ကမ္ဘာကြီးကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်သွားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအနေအထားကိုပြသနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့မေလ 25, 2018 အပေါ်အင်အားသုံးသို့ဝင်သောအရာအသစ်ကအထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (GDPR) နဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ updated ပါပြီ။ ကျနော်တို့မှန်ကန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးသာရိုးသားမှုနှင့်ယုံကြည်မှု၏အခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များသည်ငါတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ကိုသုံးနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်အချက်အလက်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစေရန်အားလုံးအစီအမံကိုသတိဖြစ်ခြင်း။
ဤမူဝါဒဒီ website ကို https://bestfiberglassrebar.com သက်ဆိုင်ပြဌာန်းချက်ပါရှိသည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက် https://bestfiberglassrebar.com တွင်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ထိန်းချုပ်သူနှင့်ပရိုဆက်ဆာသည်ကုမ္ပဏီ၊ Kompozit 21 ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးရုရှားဖက်ဒရေး၊ Cheboksary၊ Tekstilshikov လမ်း၊ ၈/၁၆ တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ "ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "ငါတို့" အဖြစ်) ။
personal data ဘာသာရပ်များဤ website ၏ဧည့်သည်များနှင့် / သို့မဟုတ် (လျှော့ "အသုံးပြုသူများ" သို့မဟုတ် "သင်" အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ဒီ website ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကိုအသုံးပြုဖို့သူအပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်။
ဒါကပေါ်လစီကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပုံကိုကရှင်းပြသည်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤသည်အသုံးပြုသူများ website`s အကြောင်းကိုစုဆောင်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ကျနော်တို့အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (Regulation (အီးယူ) 2016 / 679), အမည်ရ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအားဖြင့်သာတည်အခြေခံမူကိုလိုက်နာ
ရိုးရိုးသားသားနှင့် "ထင်သာမြင်သာရှိမှု" ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပုံတရားဝင်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်;
အချို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုဆောင်းနေကြသည်နှင့်ဤရည်ရွယ်ချက် ( "ရည်ရွယ်ချက်န့်အသတ်") နှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါကြောင်းလမ်းအတွက်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းများ၌ကြသည်မဟုတ်,
လုံလောက်သောသင့်လျော်သောသူတို့လုပ်ငန်းများ၌ထားတဲ့အတှကျရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောအရာကိုန့်အသတ် ( "ဒေတာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်") ဟူမူကား,
တိကျမှုနှင့်လိုအပ်သောသည်မှန်လျှင်, updated ပါ၏ တိုင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြေလှမ်းတိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ, အကောင့်သို့သူတို့လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ပြီးသောအဘို့ရည်ရွယ်ချက်များယူပြီး, နှောင့်နှေး ( "တိကျမှန်ကန်မှုကို") မပါဘဲဖျက်သို့မဟုတ်တညျ့ခဲ့ကြသည်ကြောင်းသေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်;
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်ထက်မပိုသောအသုံးပြုသူများကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်ပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ (“ သိုလှောင်ရန်ကန့်သတ်ချက်”)၊
သင့်လျော်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအတာကို အသုံးပြု. ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသို့မဟုတ်တရားမဝင်အပြောင်းအလဲနဲ့ထံမှအဖြစ်မတော်တဆဆုံးရှုံးမှု, ပကျြစီးခွငျးသို့မဟုတျထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ( "သမာဓိရှိနှင့်လျှို့ဝှက်") အပါအဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ, ၏သင့်လျော်သောကာကွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်လမ်းအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။
အသုံးပြုသူများလေးစားမှုအတွက်ကုမ္ပဏီများကစုဆောင်းလုပ်ငန်းများ၌ထားတဲ့ personal data ကို: အမည်, အမညျ, patronymic, ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, ခိုင်လုံသော e-mail လိပ်စာ, နေထိုင်ရာအရပ်ဌာန။ သင်ကပေးနေကြသည်သမျှဒေတာမှန်ကန်သောနှင့်တရားဝင်ဖြစ်ရပါမည်။ သင်ပေးသောအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို, ပြည့်စုံခြင်းနှင့်မှန်ကန်မှုအဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးအသုံးပြုမှု၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်,
အငြင်းပွားမှုများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဖြစ်. ,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပြဿနာများနှင့်အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်,
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များသည်ဤပေါ်လစီအတွက်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများသည်သို့မဟုတ်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (မသက်ဆိုင်၎င်းတို့၏ပိုင်နက်တည်နေရာ) ၏ဆိုဖို့ကုမ္ပဏီအားဖြင့် (သို့လွှဲပြောင်း) ထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (Regulation (အီးယူ) 2016 / 679) အရပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုအပြောင်းအလဲနဲ့များ၏မှန်ကန်မှုကိုသတိပြုမိကြသည်, ဤစည်းမျဉ်းပြဋ္ဌာန်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အတူလိုက်လျောကြောင်းအာမခံပါသည်။
ကျနော်တို့နှင့်အထက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများကအခြိနျမှနျမှအထက်ညွှန်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့တတိယပါတီများပါဝင်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့ပညတ်တရားအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံသဘောတူထားသောအစီအစဉ်များအားဖြင့်အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကိုလည်းသင့်လျော်သော, အစိုးရမဟုတ်သောစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်အလုပ်အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။
ဆုံးမခြင်း, ပိတ်ဆို့ခြင်း, ဖျက်နှင့် / သို့မဟုတ် User`s ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဖျက်မှုများအတွက်ကုမ္ပဏီမေးမြန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်လိပ်စာ sales@bestfiberglassrebar.com ဖို့သင့်လျော်တဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့မှတဆင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ကန့်ကွက်အတူကုမ္ပဏီများကို 1) ။
အသုံးပြုသူများကို 2) `ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကုမ္ပဏီ (ထိုအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြထားတဲ့အပိုဆောင်းကြေညာချက်၏ပြဌာန်းချက်မှဘာသာရပ်) ကိုမပြည့်စုံဖြစ်ခြင်း s;
သင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဒေတာ processing များအတွက်ဥပဒေရေးရာခိုင်ခိုင်လုံလုံစစ်ဆေးနေမီတွင်သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်;
4) တောင်းဆိုချက်ကိုဖို့နဲ့စနစ်တကျ, အသုံးအများဆုံးနှင့်စက်-ဖတ်လို့ရအောင် format နဲ့ကုမ္ပဏီမှကိုသင်ပေးခဲ့သငျသညျအကွောငျးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ () ကိုလက်ခံရရှိ (သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုကိုဖွဲ့စည်းအားဖြင့် sales@bestfiberglassrebar.com မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း) နှင့်ဒီဒေတာကိုလွှဲပြောင်းရန် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲအခြား controller ကိုရန်,
လိပ်စာ sales@bestfiberglassrebar.com ဖို့သင့်လျော်တဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့မှတဆင့်သင်ဟာ ပတ်သက်. ကုမ္ပဏီစတိုးဆိုင်သတင်းအချက်အလက်ရှိမရှိအကြောင်းကြားခံရဖို့ 5) ။
6) သည်ကုမ္ပဏီများထံမှလိပ်စာ sales@bestfiberglassrebar.com ဖို့သင့်လျော်တဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့မှတဆင့်ကုမ္ပဏီများကလုပ်ဆောင်နေပါသည်ကြောင်းကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများအကြောင်းကိုသင်၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက် processing ၏အတိအကျကိုရည်ရွယ်ချက် (s) ကိုတောင်းဆိုဖို့။
7) လိပ်စာ sales@bestfiberglassrebar.com ဖို့သင့်လျော်တဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့မှတဆင့်သောကုမ္ပဏီစတိုးဆိုင်များသင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ access ကိုတောင်းဆိုရန်။
ဖြစ်နိုင်မပါလျှင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိပ်စာရောင်းအားဖို့သင့်လျော်တဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့နေတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်မှုကာလဆုံးဖြတ်သည်နှင့်အညီဖြစ်သောရန်စံသတ်မှတ်ချက်, ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနှင့်ပါလိမ့်မည်သည့်ကာလအတွင်းခန့်မှန်းကာလတောင်းဆိုရန် 8) @ bestfiberglassrebar.com ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် sales@bestfiberglassrebar.com ဖို့သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ခြင်းအားဖွငျ့ဆိုစာပေးပို့အကြောင်းအသိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းမှငြင်းဆန်ရန် 9) ။
၁) ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီသင်၏တိကျမှန်ကန်သောစစ်မှန်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြည့်အ ၀ ပမာဏအပြည့်ပေးအပ်ရန်။
2) သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏မဆိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ကြသည်လျှင်, ဒီမူဝါဒအပိုင်း "အချက်အလက်များ၏ Access ကို, ဆုံးမခြင်း, ဖျက်နှင့်ဖျက်မှု" တွင်သတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းဖြင့်သင့်ရဲ့ updated ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့်အတူချက်ချင်းကုမ္ပဏီများကို;
၄) အချက်အလက်များမည်သည့်သဘောသဘာဝနှင့်မဆိုသဘောထားကွဲလွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအားအကြောင်းကြားရန်သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီအားသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ရန်အဆုံးသတ်လိုပါက sales@bestfiberglassrebar.com လိပ်စာသို့သင့်လျော်သောတောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သောသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနှင့်သဘောမတူညီကြောင်းအသိပေးခြင်းသည်အကြားဆက်နွယ်မှုများရပ်စဲရန်အတွက်တရား ၀ င်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုသူကအပြည့်အဝသတိပြုမိသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းရှိပါတီများ။
သင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီမှထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်း, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ veracity, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အချိန်မီဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်။
အဆိုပါ Company`s ငြ့်အရေးဆိုင်ရာ:
၁) ဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ခွင့်ပြုချက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါကသင်နှင့်ကုမ္ပဏီနှင့် (ကုမ္ပဏီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်တင်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသတ်မှတ်ထားသော) မည်သည့်စာချုပ်ပါသောဆက်နွယ်မှုကိုမဆိုရပ်ဆိုင်းရန်;
လက်ရှိမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆံ့သော users` အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာများမှ e-mail ပို့ပေးရန် 3) ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ anti-spam များကိုမူဝါဒလိုက်နာစောင့်ထိန်း: ပရိုမိုးရှင်းမေးလ်၏ကြိမ်နှုန်းတစ်လလျှင်3မေးလ်မှတက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
အဆိုပါ Company`s တာဝန်:
1) အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် User`s ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအချက်အလက်များ၏ကိုမဆိုများအတွက်ကုမ္ပဏီများကထုတ်ဖော်ခဲ့ကြဘယ်သူကိုမဆိုဆုံးမခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏, ဒါမှမဟုတ်တိုင်းတတိယပါတီဖို့ User`s ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကန့်သတ်သတင်းပို့ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီမဖြစ်နိုင်ထေူဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အချိုးအစားမညီမျှမှုအားထုတ်မှုကပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်လျှင်အပြောင်းအလဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်များ, ဒီပေါ်လစီကတည်ထောင်;
2) တစ်ဦးသည်သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုကိုသင်ဟာထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသည်မှန်လျှင်, သင်၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ (တတိယပါတီများ) ၏လက်ခံသူများအကြောင်းကိုသင်ကအသိပေးရန်,
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (ကုမ္ပဏီမှသိမ်းဆည်းထားသည့်) သင့်အားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို sales@bestfiberglassrebar.com သို့ပို့ခြင်းဖြင့်သင်ကသင့်လျော်သောတောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုတင်သွင်းပါကသင့်အားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် (ကုမ္ပဏီမှသိမ်းဆည်းထားသည့်) ကိုစနစ်တကျ အသုံးပြု၍ စက်နှင့်ဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်ပေးအပ်ရန်။
ထိုကဲ့သို့သောအချက်ကိုသတိပြုမိဖြစ်လာနောက်မ4နာရီအတွင်းထက် User`s ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဖောက်ဖျက် ပတ်သက်. ကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာအကြောင်းကြားရန် 72) ။ အဆိုပါကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာဖို့အကြောင်းကြားစာ 72 နာရီအတွင်းလုပ်မထားဘူးအဘယ်မှာရှိကနှောင့်နှေးမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားရလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောဖောက်ဖျက်အသုံးပြုသူများ၏အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖွယ်လျှင်ချက်ချင်းသူ / သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖောက်ဖျက်၏တကယ်တော့ ပတ်သက်. အသုံးပြုသူအကြောင်းကြားရန် 5) ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှသိမ်းဆည်းသည့်အချိန်ကာလသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပါတီများအကြားဆက်နွယ်မှုရပ်စဲပြီးနောက်သုံးနှစ်ကာလအတွက်ရရှိသည့်ပါတီများအကြားဆက်နွယ်မှုကာလတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်) ။
အဆိုပါСompanyမျှ, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ (အတစ်ဦးချင်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး) ၏ထုတ်ယူခြင်းအပေါ်ဥပဒေလိုက်နာရမည်။ 138 ပြင်ဆင်အဖြစ်နိုဝင်ဘာလ 2001, 23, ရက်စွဲပါ (ငါ) / 2001; အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (Regulation (အီးယူ) 2016 / 679) နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးသီးသန့်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက် (ညွှန်ကြားချက် 2002 / 58 / EC) ဖြင့်ညွှန်ကြားချက် 2009 / 136 / EC အနေဖြင့်ပြင်ဆင်အဖြစ်။
အချက်အလက်များ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်, ဖျက်နှင့်ဖျက်မှုကိုမှ Access ကို။
သင်ကမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုလိုပါကကျနော်တို့ကိုသင်အကြောင်းကိုသို့မဟုတ်သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမဆိုပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုလျှင်သိုလှောင်မူထသော, သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကုမ္ပဏီအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသေချာပုံကို, သင်ကတောင်းဆိုစာတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအရေးအသားအတွက်ကုမ္ပဏီတို့အားဤသို့သောတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုကိုသင်, ခံယူမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်ဆန္ဒရှိသောသတင်းအချက်အလက်သင့်အမည်, လိပ်စာနှင့်ဖော်ပြချက်ပါဝင်ရပါမည်။ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုကိုအီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ sales@bestfiberglassrebar.com မှတဆင့်သင်ကအားဖြင့်တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ကွတ်ကီးများ, tags များနှင့်အခြားဖေါ်ထုတ် ( "cookies")
ကွတ်ကီးစံအင်တာနက်မှတ်တမ်းအချက်အလက်များနှင့် User`s အပြုအမူသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအပေါ်ထားရှိသည့်စာသားဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအကြှနျုပျတို့၏ website တစ်ခုချင်းစီ session များအတွက်ကွတ်ကီးဖန်တီးပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ကိုသင်လုပ်မဆိုရွေးချယ်လုံလောက်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်;
ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်ရှိအသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်လျော်သောတိုးတက်မှုများလုပ်ခွင့်ပြုမှသကဲ့သို့။
ကကွတ်ကီးမရှိဘဲဤ website ကိုသုံးစွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ ကွတ်ကီး၏ကုမ္ပဏီရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ sales@bestfiberglassrebar.com မှတဆင့်သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။